Free Download Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း 1.0.1 APK - Techo State
Free Download Shan Koe Mee – ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း 1.0.1 APK
Description of Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း
Shan Koe Mee – ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း သည် နောက်ဆုံးထွက်လာသောဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဂိမ်းထဲတွင် ရှမ်းကိုးမီး၊ ရွှေရှမ်း စသည့် မြန်မာ့ရိုးရာ လူကြိုက်များသောဖဲကစားနည်းများပါပါသည်။ ဂိမ်းထဲတွင် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထား၍ ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရိုးရှင်းသပ်ရပ်စွာ တင်ပေးထားသည်။ Beauty dealer နှင့်အတူတူဖျောဖြေဇိမ်ခံလိုက်ပါ။
♠ အလကားဒေါင်းလုပ်ပြီး အလကားကစားလို့ရပါတယ်။ ဂိမ်းဝင်မှ လက်ဆောင်အများအပြားရယူနိုင်မယ်။ နေ့တိုင်းကိစ္စပြီးသွားရင်လည်း လက်ဆောင်အလကားရယူနိုင်မယ်။
♠ ဆိုင်းအင်းလုပ်စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်ဂိမ်းဝင်လို့ရပါတယ်။ အခုကစားချင် ရင်ချက်ချင်းဝင်လို့ရပါတယ်။ Facebookအကောင့်နဲ့ဝင်ရင်လည်းရပါတယ်။ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး သူငယ်ချင်းတို့နဲ့အတူတူ ကစားလို့ရပါတယ်။
♠ နေရာတိုင်းကသူငယ်ချင်းတွေကိုဖွဲ့လို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း chipsပို့ပြီး သူငယ်ချင်းချစ်ကြည်ရေးအဓန့်ရှည်ပါစေ။
♠ သူငယ်ချင်းဖိတ်ခေါ်ပြီး သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဖဲကစားနည်းကျွမ်းကျင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖိတ်ခေါ်လာပြီး သင့်အတွက် လက်ဆောင်သာမကဘဲ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ ငွေပဒေသာပင်စိုက်ပြီး နေ့တိုင်းလောင်းကြေးအများအပြား သီးနိုင်မယ်နော်။
♠ ဒီနေ့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်နေလား။ Lucky wheel နဲ့ Slot တို့ကိုစမ်းကြည့်ပါလား။ ဒီနေ့ ဆုကသင့်ဆီကို ရောက်လာမယ်နော်။
♠ သင်ကကျွမ်းကျင်သူအနေနဲ့ ထိပ်တန်းမှာစာရင်းကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကစားနည်းကို အားလုံးကိုကြွားပြပါ။
♠ ဂိမ်းထဲမှာ ပိုက်ဆံဖြင့်တကယ့်တကယ် လောင်းကစားလို့မရပါ။
Shan Koe Mee – Shan Koe Mee is one of the latest games released. In the game, Shan Ko Mi, There are popular traditional Burmese card games such as Shwe Shan. The game is fully functional and the game environment is simple and tidy. Have fun withabeauty dealer.
ဒေါင်း You can download and play for free. You can get many gifts by entering the game. You can also get free gifts after every day.
တိုက်ရိုက် You can enter the game directly without signing up. If you want to play now, you can enter immediately. You can also sign in with your Facebook account. At any time. You can play with your friends anywhere.
ဖွဲ့ You can make friends everywhere. Send chips to each other and make friends.
♠ Inviteafriend and compare your card skills with your friends. Successfully inviteafriend and makealot of money every day by making lots of money with your friend as well asagift.
♠ Do you think you are lucky today? Try the Lucky wheel and Slot. The prize will come to you today.
As an expert, you can see the list at the top. Show everyone your skill in the game.
ပိုက်ဆံ You can not really gamble with money in the game.
Do not hesitate. Enter the game
App Information of Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း
App Name Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း
Package Name com.yourfun.shankoemee
Rating ( 431 )
Tags: download Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း 1.0.1, Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း
Related Posts of Shan Koe Mee - ရှမ်းကိုးမီး ရွှေရှမ်း
Candy Fever 9.7.5016
International Fashion Stylist: Model Design Studio 4.5
Need for Speed™ No Limits 4.7.31
Perfect World Mobile 1.331.0
My Talking Angela 4.7.2.796
Tips for Lulu Blue box skins